Miyey Harry Kane & Ndombele Kasoo Kaban Doonaan Dhaawacyadii Xalay Oo Ay Ciyaari Doonaan Kulanka Arsenal Ee Axadda? - GOOL24.NET
Miyey Harry Kane & Ndombele Kasoo Kaban Doonaan Dhaawacyadii Xalay Oo Ay Ciyaari Doonaan Kulanka Arsenal Ee Axadda?
Jose Mourinho ayaa ka hadlay dhaawac soo gaadhay weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane intii ay socotay ciayartii Dinamo Zagreb oo laga saaray, kaddibna baraf lagaga xidhay muruqa.
Tottenham ayaa lugta hore ee wareegga 16ka Europa League waxay 2-0 ku garaacday Dinamo Zagreb oo ka dhisan waddanka Croatia, waxaana labadan goolba dhaliyey Harry Kane ka hor intii aan dhaawaca lagu saarin.
Daqiiqaddii 84aad ayaa Kane uu ka baxay garoonka iyadoo lagu beddelay Carlos Vinicius, waxaana shaashadaha uu kasoo baxay iyadoo lugta midig lagaga xidhayo baraf, si aanuy barar u samaynin, isla markaana xanuunku uga yaraado.
Dhaawacan ayaa waxa uu keenay su’aal ah, haddii uu Harry Kane taam u noqon karo kulanka Tottenham ay Axadda u tegayso Arsenal, laakiin Jose Mourinho oo ka hadlay ayaa hoos u dhigay cabsida ah in weeraryahanka reer England uu seegi karayo kulankaas.
Mourinho oo wax laga weydiiyey dhaawaca Kane, ayaa waxa uu sheegay in uu taam u noqon doono, kuna soo bilaaban doono ciyaarta Arsenal, waxaanu yidhi: “Ma rumaysni in dhaawaca Harry uu weyn yahay.
“Axadda waxa jirta kulan uu qof walba doonayo inuu ciyaaro, waxyaabo yaryarna kama joojin doonaan Kane inuu ciyaaro. Ma hayo dareen halis ah. Wax walba ayuu samaynayaa. Wuxuu samaynayaa shaqadii weerarka ee dhalinta goolasha.”
Jose Mourinho wuxuu amaan u jeediyey Harry Kane, waxaanu yidhi: “Marka uu Harry ku jiro garoonka, sheekadayadu way ka duwan tahay marka kale.”
Tanguy Ndombele ayaa sidoo kale ciyaarta qaladaad badan lagu galay, iyadoo xerada ganaaxa dhexdeeda lagu laaday, inkasta oo aanu garsooruhu waxba u qabanin.
Jose Mourinho ayaa sida Kane oo kale tilmaamay in Ndombele uu taam u noqon doono kulanka North London derby, waxaanu yidhi: “Sidii aan horeba u idhi, waa ciyaar uu qof walba doonayo inuu ciyaaro. Waxyaabo yaryari kama joojin doonaan inay ciyaaraan.”